Date My Pet » Inona Twitter no hampianatra anareo ny momba ny fitiavana?
Tato ho ato, tambajotra sosialy, angamba ny toerana misy ny olona mandany ny ankamaroan'ny fotoana, rehefa afaka izy na.
Raha marina izany fa matetika ny fotoana lany ao amin'ny haino aman-jery sosialy Hita ho tsy misy dikany ny marim-pototra rehetra chitchats sy ny fifosana, indraindray ny olona farany mianatra be dia be ny zavatra mahaliana sy tena ilaina avy amin'ireo tranonkala. Ohatra, misy tambajotra sosialy pejy izay manome vaovao sy ny zava-baovao fomba fanamboarana, pejy izay hampianarana ny olona momba fironana lamaody farany, sy ny sisa.
Avy eo dia, misy afaka mianatra lesona iray fotsiny amin'ny alalan'ny fanehoana mpampiasa tsy tapaka ny tambajotra sosialy; eto ambany ny sasany lesona fitiavana fitorahana bilaogy kiritika Twitter toerana dia mampianatra.
1. Ny fitiavana dia tsy ny mijanona miara-:
Izany no lesona iray Miley Cyrus tamin'ny alalan'ny Twitter nanome antsika nandritra ny rava amin'ny ankizilahy Justin Gaston tamin'ny Febroary, 2011. Nanambara ny fisarahana amin'ny bilaogy madinika toerana, Kyrosy fa tena tia tsy afaka ny hanana tsara fiafara toy ny tena fitiavana mifarana na oviana na oviana.
Ny teo aloha ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra kintana Hanna Montana fanilihana koa fa fomba iray hafa amin'ny fanehoana fitiavana ny. Izany dia ny fitiavana lehibe lesona ho an'ny rehetra, na tanora na antitra.
Raha tia olona, tsy maintsy mahafantatra ny fomba aoka izy / izy handeha. Raha misy olona tsy te-ho tia anao foana na hiaraka aminao, tokony tsy te hanao azy / azy hanao izany kery; Ny antony dia satria raha tia ilay olona, Azo antoka fa ianao te-hijery azy / azy hoe sambatra.
2. Misy zavatra vitsivitsy tsy tokony manonona rehefa mandany fotoana miaraka amin'ny namany:
Vao haingana izay nisy tenifototra malaza ao amin'ny Twitter izay nanampy ny olona manangona fahalalana momba ny zavatra izay tsy tokony hoe amin'ny daty. Ny tenifototra Toy izany: #FiveWordsToRuinADate.
Users namoaka soso-kevitra maro momba ny teny izay mety hanimba ny daty. Ny sasany amin'ireo fanoloran-kevitra ireo tena mendrika ny mitadidy.
Ohatra, Matt Lieberman, iza no miaramila AfterBuzz TV, nanoratra fa araka ny azy teny dimy izay mety hanimba ny daty dia “ianao hanoroka tahaka ny havanay”. Inona no Lieberman Te hilaza izany dia fahadisoana lehibe ny miresaka momba ny lasa fifandraisana eo anoloan'ny vaovao ny fitiavana.
Ohatra iray hafa ny tweet avy Jeff Drake, ny mpanoratra. Ny dimy teny voarara, araka ny azy, dia “ny reniko dia afaka manery antsika”. Izany dia mety ho fanambarana lehibe spoilsport raha tononina, rehefa mandany fotoana miaraka amin'ny namany, indrindra raha toa ianao ka tovolahy.
Eny, Azo antoka fa ianao dia manana ny zo ho tia ny mamanao, fa ny ankamaroan'ny ankizivavy mankahala ny mahita ny olona eo amin'ny fiainany mitondra momba ny reniko, na dia niresaka be loatra momba ny.
Ampidiro ny tenifototra ao amin'ny Twitter #FiveWordsToRuinADate fikarohana bar; dia hahazo ny hahita maro toy izany soso-kevitra mahaliana sy mahasoa.
3. Zavatra kely atao mahagaga:
Ny fitiavana dia ny zavatra madinika; fifanakalozan-kevitra, fara fahakeliny, ao amin'ny Twitter izany soso-kevitra. Ohatra, ny bitsika avy Patama Posts dia toa manondro fa ny tovovavy tia ny zavatra niainan'ny namihina avy any aoriana.
Zavatra kely izany dia afaka manao namanao hahatsapa hoe tiana izy ary mampianatra Twitter maro amin'izy ireo.